‘Waan ku faraxsanahy in aan DARBEYN doonin Sanchez!”, – Ciyaaryahan Manchester United oo ka tirsan oo qiray in ka nasan doono laadadkii uu ku dhufan jiray Alexis markii uu Arsenal ka tirsanaa! – Gool FM
‘Waan ku faraxsanahy in aan DARBEYN doonin Sanchez!”, – Ciyaaryahan Manchester United oo ka tirsan oo qiray in ka nasan doono laadadkii uu ku dhufan jiray Alexis markii uu Arsenal ka tirsanaa!
(Manchester) 1 Feb 2018. Marcos Rojo waxa uu ku mahadinayaa in Alexis Sancehz ka mid yahay Manchester United maadama ay is LAAD LAADI jireen markii ay kooxohooda kala duwan kala matali jireen.
Sancehz heshiis u dhacay qaab is weydaarsi ah bishii Janaayo ugu soo biiray United halka Henrikh Mkhitaryan dhinaca kale aaday.
Chile-yaanka waxa uu caawin sameeyey kulankiisii ugu horreeyey ee FA Cup-ka Yeovil Town halka uu koontadiisa furay ciyaartiii Premier League-ga ee Huddersfield Town.
Rojo marar badan ayuu Sancehz wajahay haddii ay ahaan lahayd koox iyo dal balse waxa uu rajeynayaa in heerkiisii are la yimaado masraxa riyada.
‘Marar badan ayaan wajahay, isaga oo Arsenal ama Chile u dheelaya,’ ayuu yiri Argentinian-ka oo la hadlaya Inside United.
“Mar walba waxa aan u muuqanay kuwo gegida ku dagaalama markaa wey wacan tahay in aan isku dhinac nahay, mar walba waxaan ku dambeyn jirnay in aan is LAAD LAADNO.
‘Taasi waa qaab ciyaareedkeyga aan u dheelo. Sidaas ayaan ahaa tan iyo yaraanteydii. Waxaan ahay dagaalow ku xamaasadeysan gegida. Waxaan ahay nooca ciyaaryahanada saxda ah ee Koonfurta America. Waxaan nahay dagaal yahanno.
“Waa wax dhiiggeyga ku jira. Ma is bedeli doono. Laakin Alexis waa shaqsi wanaagsan, laakiin waa in aan barto.
‘Waa ciyaaryahan wanaagsan waxaana rajeynayaa in uu heerkiisa ugu sarreeya keeno United.
‘Si wacan ayuu u sal dhiganayaa. Guri cusub ayuu helay. Dhabtii, waa kii markii aan imid United aan lahaa.’
Thiago Silva oo u diray taageereyaasha PSG farriin MURUGO iyo REJO BEEL AH kaddib markii caawa KEYDKA la dhigay!
HORDHAC: Ostersunds FK vs Arsenal....(Gunners oo Si Dhab ah u ciyaareysa koobkan)